Codsiga Shuruucda Dibadda iyo Xallinta Khilaafaadka ee Imaaraadka. Maxaad u baahan tahay inaad ogaato. 0000
Codsiga Shuruucda Dibadda iyo Xallinta Khilaafaadka ee Imaaraadka. Maxaad u baahan tahay inaad ogaato.
1 Comment	/ qareen, blog, Sharciga ganacsiga, kiisaska maxkamada, Dowladda / By Sarah
Dood kooban oo ku saabsan ku dhaqanka Xeerarka Dibadda iyo Xalinta Khilaafaadka maxkamadaha Imaaraatka Carabta
Shuruuc kala duwan oo ajnabi ah ayaa khuseeya shirkadaha kale ee ka shaqeeya gobollada kala duwan ee Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE). Haddii aad tahay shaqaale ama hay'ad ganacsi, waxaa lagaa doonayaa inaad raacdo sharciga xukumaya howlahaaga ganacsi. Tusaale ahaan, haddii aad maamusho shirkad gaadiid oo aad mushaharkaaga ku bixin weydo waqtiga loogu talagalay, waxaa lagugu soo oogi karaa xatooyo mushahar ah. Su’aashu hadda waxay tahay, waa maxay sharciyada shisheeyaha ee lagu dabakhi karo Imaaraadka?
Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE) waxay la kulantay sannado badan oo horumar dhaqaale ah waxayna u kacday inay tahay xarunta ugu weyn ee ganacsiga gobollada, iyadoo soo jiidanaysa is-weydaarsiyo isweydaarsi kala duwan. Horumarka dhaqaale wuxuu u horseeday khabiiro maaliyadeed iyo dhinacyadu qandaraasyo Imaaraatka inay inta badan doortaan sharci ajnabi ah, qaasatan sharciga Ingriiska, si ay u matalaan xiriirka awooda isla markaana u doortaan meel ka baxsan goobta ama dhexdhexaadinta sida ikhtiyaar ka duwan dhanka dacwada.
Intaa waxaa sii dheer, qaadashada gander-ka nidaamka sharciga ee Imaaraatka, deegaan caadi ah oo leh joogitaan adag oo ah aagag xor ah oo dhaqaale oo lagu soo bandhigo sharciga ku saleysan caadada ayaa ah mid muhiimad weyn leh, waana ku qanacsanahay inaan soo bandhigno buug aasaasi ah oo dhameystiran. kaa caawiyo fahamka waxyaabaha muhiimka ah ee go aanka sharciga, garnaqista iyo u kala gar qaadida Imaaraadka.
U qalmida khaaska ah ee quseysa waa in loo dhexeeyaa qaybaha go'aanka sharciga dibedda, gar qaadista iyo dacwadda. Hoos waxaa ku yaal qodobbada la tixgelinayo:
First, Dhulka UAE
Waxaa maamula dowladda iyo shuruucda heerka Imaaraatka oo leh maxkamado kala duwan oo u dhow, oo lagu tilmaamo maxkamadaha Imaaraadka.
Marka labaad, aagagga xorta ah ee dhaqaalaha, gaar ahaan, Xarunta Maaliyadeed ee Caalamiga ah ee Dubai (DIFC) -
Aagga xorta ah ee dhaqaalaha ee Emirate-ka Dubai oo ka kooban waax iskeed isku fillan oo ka tirsan gudaha Imaaraadka, laguna soo bandhigo sharciga ku saleysan caadada, iyadoo lagu dabaqayo qaabkeeda heerarka iyo sharciyada ganacsiga iyo kontaroolada iyo taas oo maxkamad madax-bannaan ay ka sameysay Xarunta Dhaqaalaha ee Dubai Maxkamadaha.
Maxkamadaha Imaaraadku ma sii wadaan go’aanka ay dhinacyadu gaaraan heshiis ku saabsan in lagu dabaqo sharci shisheeye?
Heer aasaasi ah, xulashada sharci kormeer dibadeed waa la oggol yahay. Si kastaba ha noqotee, maxkamadaha Imaaraadku waxay sii wadi doonaan go'aankan illaa heerka shuruucda ajnabiga ah aysan diidi doonin Shareecada Islaamka, codsi furan ama anshax ee Imaaraatka, xiriirkuna kuma wareego arrimo kala duwan oo ku saabsan codsi furan oo loo maleeyo sida xuquuqda dib u celinta, shaqo, ka mid noqosho xafiiska ganacsiga, iyo qandaraasyo ku dhammaaday walxaha dowladda Imaaraadka.
Intaa waxaa sii dheer, codsiga furan ee deganaanshaha ee uu sameeyay qof degan, sida loogu fasiray UAE, waa mid ballaaran oo lagu daro, marka lagu daro waxyaabo kale, arrimaha heerarka shaqsiyeed, fursadda isdhaafsiga, faafinta hantida, iyo heerarka lahaanshaha shaqsiyeed, si darajada arimahani aysan diideynin qabanqaabada aasaasiga ah iyo heerarka aasaasiga ee Shareecada Islaamka. Waqtiga dheer, in kastoo sharciyada ajnabiga ah la ogolaan karo, dhab ahaan, xirfadlayaasha sharciga wali waxay la kulmayaan dhibaatooyin ku dabakhida xeerarka shisheeyaha maadaama ay ahayd inay cadeeyaan jiritaanka iyo waxa ku jira sharciga ajaanibta maxkamada sida arin xaqiiq ah.
Wkoofiyaddu ma yihiin khataraha la xiriira go'aanka sharciga ajnabiga ee ku matalaya heshiiska dhulka UAE?
Marka hore, xisbiga u yeeraya sharciga ajnabiga wuxuu leeyahay culeys cadeyn ah joogitaanka iyo nuxurka sharciga ajaanibta ah.
Xisbiga u yeeraya sharciga ajnabiga wuxuu leeyahay culeyska cadeynta joogitaanka iyo nuxurka sharcigan ajaanibta ah maxkamadaha Imaaraadka. Ka soo qaad in kooxda adeegsaneysa sharciga shisheeye ay ku guuldareysato inay muujiso sida loo adeegsanayo sharcigaas ka baxsan., Maxkamaddu markay fiiro gaar ah u yeelato waxay si dhab ah u dabakhi kartaa sharciga Imaaraadka oo ka madax bannaan wax faham ah.
Marka labaad, sharciyada Imaaraadku way khuseeyaan, iyada oo aan loo eegin sharciga shisheeye ee la doortay.
inkastoo Qodobka 257 ee Xeerka Madaniga ee Imaaraadka maahan mid mamnuucaya sharciyada shisheeye ee heshiisyada, maxkamadaha Imaaraadka waxay go'aansadeen in sharciyada Imaaraadku si kastaba ha ahaatee ay khuseeyaan. Go'aanka wuxuu ku saleysnaa qodobka ah in dhinacyadu ay dayaceen inay soo bandhigaan soo jiidasho iyo xaqiijin weyn oo joogitaanka sharciga ajnabiga ama ay dayaceen inay go'aansadaan waxyaabaha ay leeyihiin. Tusaalooyinkaan, maxkamadaha Imaaraadka waxay iska indha tirayaan sheegashada dhinacyada isla markaana qiimeeyaan faa'iidooyinka kiiska sida ku xusan sharciyada Imaaraadka.
Ta saddexaad, Tayada dhinacyada badan ee Sharciga Dibadda.
Si tartiib tartiib ah, tayada dhinacyada badan ee sharciga ajnabiga ah ma soo ifbaxayo haddii khilaafka lagu taliyo in lagu kala garqaato, maaddaama maxkamadda Imaaraadku ay qaadeyso amar siinta sharafta Imaaraadka. Ma sahamin doonto faa'iidooyinka kiiska. Waxay ku dabaqi doontaa Heshiiska Aqoonsiga iyo Meel marinta Abaalmarinta Garqaadka Shisheeye ikhtiyaar caalami ah ama habsami u socodka hirgelinta ayaa u istaagay dhexdhexaadinta reerka ee lagu taliyay Qodobka Sharciga Madaniga ee UAE.
Tan afraad, Ma laha wax xasaanad ka qaadid mas'uuliyadda
Go'aansiga adeegsiga sharciga shisheeyaha heshiisku kama dhowrayo heshiiska inuu masuul ka ahaado fikradaha muhiimka ah ee sharciyada Imaaraatka, si sax ah fikirka ballaadhan ee codsiga furan. Maxkamad Imaaraatka Carabta ah ayaa laga yaabaa inay horumariso fikirkan haddii arintu ka horeyso. Intaas waxaa sii dheer, maxkamaddu way qaadan kartaa codsiga, haddii ay tahay maxkamadda awoodda u leh inay ku dooddo dood ama haddii maxkamadda awoodda lihi ay ku tiirsan tahay oggolaanshaha xukun shisheeye ama maamuus garqaad. Si kastaba ha noqotee, Maxkamadda DIFC waxay u aragtaa sharci shisheeye waana inay ku dabaqdaa khilaafka hadda taagan heer aasaasi ah.
Qodobka 257 ee Sharciga Madaniga ah ee Imaaraatka ma mamnuucayo sharciyada ajnabiga laakiin sharciyada Imaaraatka si kastaba ha ahaatee waa lagu dabaqi doonaa.
Waa maxay Xallinta Khilaafaadka?
Xallinta Khilaafaadka Beddelka ahi waa habka kale ee lagu xalliyo khilaafaadka iyada oo aan la kala qaadin iyada oo loo maro dhexdhexaadin ama dhexdhexaadin.
Waa maxay go'aaminta khilaafaadka goleyaasha ay dhinacyadu sharci ahaan u oggolaan karaan Imaaraadka?
Maxkamadaha gudaha -
Nidaamyadeeda ayaa ah, inta badan, waxay ka kooban yihiin saddex heer munaasabadda koowaad, dalab, iyo dacwad. Nidaamyada maxkamaddu si joogto ah ayey u daalaan.
Maxkamadaha DIFC ee masuulka ka ah hay'ad ismaamul
Shuruudaha sinnaanta ee maxkamadda DIFC waxay leedahay laba heer oo keliya; tusaalaha koowaad iyo maxkamada dalabku, taas oo abuureysa habsami usocodka maxkamadaha dhex dhexaad ka ah maxkamadaha UAE ama Maxkamadaha Duba.
DIFC waxay leedahay nidaamkeeda gaarka ah ee sharciga ganacsiga iyo sharciga madaniga ah.
Dhex-dhexaadintu waa madasha guud ee aan-garsoorka ahayn ee xallinta khilaafaadka halkaas oo laba dhinac ay ku heshiiyaan dhexdhexaadiye dhexdhexaad ah ama garsoore. Nidaamyada dhex-dhexaadinta waxaa badanaa loo adeegsadaa qoysaska ama adduunka oo dhan, hay'ad ama deg deg, marka laga reebo arrimaha loo arko inay yihiin dalab furan oo codsi ah oo lagu soo bandhigay aagga kor ku xusan.
Waa kuwee dhinacyada hadda iyo mar kale doorta golayaasha dhexdhexaadinta ee Imaaraadka?
Dhex dhexaadintu waa xal kale oo lagu xaliyo khilaafaadka (ADR) maadaama ay horumar ballaaran ku soo martay Imaaraadka. Imaaraadku wuxuu casriyeeyay qaabkiisa ku wajahan faragelinta si uu ula kulmo talaabooyinka caalamiga ah iyo dhaqamada ugu fiican.
Xarunta Xalinta Khilaafaadka Caalamiga ah ee Dubai (DIAC) waa xarumo muuqda oo ku yaal Imaaraadka waxayna si gaar ah u yaqaaneen, gaar ahaan tilmaamaheeda lagu muujiyay Xeerarka ICC. DIFC-LCIA waa ujeedo faragalin ah oo lagu aasaasay iskaashi xasaasi ah oo udhaxeeya DIFC iyo Maxkamada London ee Xalinta Khilaafaadka Caalamiga.
1 wuxuu ku fikiray “Codsiga Shuruucda Dibadda iyo Xallinta Khilaafaadka Imaaraadka. Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.
Pingback: Muhiimadda Talooyinka Sharciga ee Qandaraasyada Ganacsi ee Dubai, UAE 00000 | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Inta badan Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo ee Ku Saabsan Lacagta La Dhaqay ama Hawala ee UAE: Miyaan la kulmi doonaa Ciqaab?
Fahamka Aasaasiga ah ee Qareennada Imaatinka Khidmadaha iyo Adeegyada Sharciga.
Raadi Garyaqaanka Difaaca Dambiyada ee ugu Fiican Dubai, UAE
Nidaamka Caddaaladda ee ugu Fiican Dubai: Sida ay u shaqeyso, iyo Maxay tahay inaad ka walwasho.
Tilmaamaha lagu ilaalinayo Maalgelintaada Sharciga Imaaraadka: Talo Sharci oo loogu talagalay Maalgashadayaasha Shisheeye ee ku sugan Dubai.
Muhiimadda Talooyinka Sharciga ee Qandaraasyada Ganacsi ee Dubai, UAE 00000 | Shirkadaha Sharciga ee Dubai on Codsiga Shuruucda Dibadda iyo Xallinta Khilaafaadka ee Imaaraadka. Maxaad u baahan tahay inaad ogaato.
Ann on Maxaa dhacaya haddii aadan dib u bixin amaahda ama kaarka deynta creditka ee UAE?
Juanitah Ntambi Precious on Noocyada Kufsiyada Sharciga Dambiyada
legalbridge-admin on Noocyada Xabsiyada Assault
Ashley on Noocyada Xabsiyada Assault
Shil ka dhacay Dubai
Qareennada Dembiyada ee Dubai
qareenada xaasaasiga ah